Somaliland.Org » Daahir Riyaale oo galabta dalka ku soo laabtay, kana xogwarramay dalxiiskiisii Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska
September 28th, 2008 Comments Off Hargeysa (Somaliland.org) – Hoggaamiyaha xukuumadda KMG ka ah ee Somaliland, mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa galabta dalka ku soo laabtay, isaga oo ka soo kicitimay dalka Ingiriiska oo uu ku soo gebagebeeyey booqasho laba toddobaad ah oo u soo maray saddex dal oo Yurub ah. Waxana uu xaqiijiyey in dalxiiskiisaas Faransiiska iyo Ingiriisku uu la xidhiidho “la-dagaalanka Budhcad-badeedda xeebaha Soomaaliya”.
Mudane Riyaale oo galabta markii uu ka soo degey madaarka Hargeysa, isaga oo ka soo kicitimay Addis Ababa oo uu ku soo hakaday Jimcihii, waxa uu saxaafadda kula hadlay qolka nasashada marti-sharafta ee Madaarka, wuxuuna xogwarran ka bixiyey socdaalkiisa iyo arrimihii ay ka wadahadaleen madaxdii uu la kulmay.
Mudane Riyaale, isaga oo ugu horrayn ka hadlaya Faransiiska oo uu booqashadiisa ka bilaabay, waxa uu yidhi, “Faransiiska waxaanu la kulanay la-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Afrika oo muhiim ah oo aanay wadamada kale ee Yurub lahayn, kaas oo ah nin awood gaara leh oo aanu kula kulanay Madaxtooyada Faransiiska lafteeda. Waxaanu iska waraysanay xaalada mandaqada iyo Faransiisku waxa uu inala qaban karo. Waxaan u arkay kulankayagaas runtii way ogolaayeen qolada Faransiisku in ay wax inala qabtaan. Waxa kale oo aanu la kulanay nin u qaabilsan Faransiiska Arri